KAOMININA DIDY : Nahazo famatsiam-bola ny fikambanam-behivavy sy ny VOI
Nosoniavina ny sabotsy 07 septambra 2019 lasa teo ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Vondron’olona ifotony miisa valo sy ny fikambanam-behivavy miisa roa avy ao amin’ny Kaominina Didy Ambatondrazaka iny izay tafiditra ao anatin’ny ilany atsinanan’i Madagasikara. 11 septembre 2019
Isan’ny namatsy izany ny famatsiam-bola maitso miatrika ny fiovaovan’ny toetr’andro (Fond vert climat) izay miara-miasa amin’ny C.I (Conservation International). Fantatra fa ny tontolo voajanahary lovain-jafy no tanjona, ka ny seha-pambolena mifanaraka amin’izany no notolorana io famatsiana io. Ny voly tsaramaso sy kafe no nosafidian’ny mpahazo tombontsoa tamin’izao famatsiam-bola izao.
Masomboly voafantina avokoa no hozaraina amin’izany. Natao hitsinjovana ny fameloman-tenan’ny tantsaha ny fambolena tsaramaso ary nentina hitsinjovana ny fambolena maharitra sady hitsinjovana ny taranaka. Lovain-jafy ny voly kafe izay voalaza fa taorian’ny fanaovana tolo-bidy no nifantenana ny mpamatsy ny masomboly.
Afa-po tanteraka tamin’izao fomba nentina nanatanterahana ny fiaraha-miasa izao ny vahoakan’i Didy izay nanambara fa vonona hatrany izy ireo ny hikajy ny tontolo iainana ary hiezaka ny hitraka ihany koa hampiakatra ny seha-pihariana any amin’izy ireo amin’ny alalan’ny fanatsarana io fambolena nahazoana famatsiana io. Nisaoran’izy ireo manokana ny mpamatsy izay nitsinjo manokana azy ireo. Vory lanona tao an-tampon-tanànan’i Didy avokoa ireo mpahazo tombontsoa izay natrehan’ny ben’ny tanànan’i Didy, Radoka Davidson.
Ity farany izay nanambara fa zava-dehibe ho an’ny kaominina iadidiany ny fahazoana famatsiana mivantana ho an’ny vahoaka tahaka izao. Tafiditra ao anatin’ny fikajiana hatrany ny tandavan’alan’ Ankeniheny Zahamena moa izao ezaka izao, indrindra ho an’ireo mponina izay mivelona manamorona iny ala arovana iny. Nisaoran’ny tompon’andraikitra avy eny anivon’ny C.I moa ny vahoakan’i Didy sy ny tompon’andraikitra avy ao an-toerana izay tonga nanatrika sy nanome voninahitra ity lanonana fifanaovan-tsonia ity.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (443) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (184) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (169) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (126) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (87) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (85) 24 novembre 2020